नेपाल लाइफ इन्स्याेरेन्सले ल्यायाे सदावहार जीवन बीमा योजना, यस्ता छन विशेषता – Clickmandu
नेपाल लाइफ इन्स्याेरेन्सले ल्यायाे सदावहार जीवन बीमा योजना, यस्ता छन विशेषता
क्लिकमान्डु २०७६ जेठ २६ गते १६:१५ मा प्रकाशित
काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले आइतबारदेखि ‘सदावहार जीवनका लागि सदावहार जीवन बीमा योजना’ सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले आफ्ना उच्च अधिकारी र एजेण्टहरूको उपस्थितिमा एक कार्यक्रमका बीच उक्त बीमा योजना सार्वजनिक गरेको हो ।
कम्पनीले केही महिनाअघि घातक रोग सुविधा योजना ल्याएको थियो ।
आजको कार्यक्रममा कम्पनीका उप–प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री सन्तोष प्रसाई यस योजनाबारे थप प्रष्ट्याउँदै भने। ‘आजको समयमा धेरैजसो व्यक्तिहरू आफूले गरेको लगानीको प्रतिफल कम समयमा प्राप्त गरी जिन्दगीभर ढुक्क रहन चाहन्छन् । सेवाग्राहीहरूको यही चाहनाअनुसारको बीमा योजना जनसमक्ष प्रस्तुत गर्ने क्रममा यस कम्पनीले ‘नेपाल लाइफ सदावहार जीवन बीमा योजना’ ल्याएको हो ।’
उनका अनुसार यो योजनामा प्रत्येक वर्ष बीमांकको ५ प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम बीमालेखको वार्षिकोत्सवमा भुक्तानी हुनेछ । साथै, आजीवन जोखिम बहन गर्नु र बीमा अवधिपश्चात पनि समर्पण मूल्य प्राप्त गर्न, यस योजनाको मुख्य विशेषता हो ।
यो बीमा पोलिसी खरिदका लागि न्यूनतम उमेर ११ वर्ष र अधिक्तम उनेर ६५ वर्ष तोकिएको छ । साथै, यसमा ऐच्छिक सुविधा प्रवेश उमेरको व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसमा दुर्घटना मृत्यु लाभ, बीमाशुल्क छुट सुविधा र अशक्त सुविधा लिनका लागि १६ वर्ष र घातक रोग सुविधा लिनका लागि १८ वर्ष उमेर तोकिएको छ ।
बीमा शुल्क भुक्तानी अवधि न्यूनतम ५ वर्ष र अधिक्तम २० वर्ष रहेको यो योजनाको बीमा शुल्क भुक्तानी समाप्त हुने अधिकतम उमेर ७० वर्ष । त्यस्तै, बीमाशुल्क भुक्तानी एकल, वार्षिक, अर्ध–वार्षिक, त्रैमासिक र मासिक तरिकाले गर्न सकिने कम्पनीले बताएको छ ।
करिब ३२ प्रतिशत बजार हिस्सा ओगटेको यस कम्पनीको चुक्तापूँजी जीवन बीमा क्षेत्रकै सर्वाधिक रू. ५ अर्ब ४९ करोड ९६ लाख १६ हजार ८ सय १० रहेको छ भने लगानी रू. ६७ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, कम्पनीको जीवन बीमा कोष ५९ अर्ब रुपैयाँ र शेयरधनी कोष १० अर्ब ४० करोडभन्दा बढी रहेको छ ।
विगत १८ वर्षदेखि सेवा तथा सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ ।